“धर्मनिरपेक्ष पछिको दशै पर्व र शासकिय सोचको समाजशास्त्रीय विश्लेषण”
Created on Friday, 19 October 2012 01:02
नेपालमा दशैलाई बडा दशै, हिन्दुहरुको महान चाड, नेपालीहरुको महान चाड विजय दशमी आदि इत्यादि नामहरुबाट पुकारिएको सुनिन्छ । त्यी पुकारबाट के बुझिन्छ भने नेपालको अझैपनि राज्यको राष्ट्रिय चाड मात्र दशै नै हो भन्ने । यद्यपि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषण भई अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भईसकेको अवस्था हो । तर पनि यो दशै चाडलाई मात्र किन राज्यले नै विशेष महत्व दिएको जस्तो गरेको छ त फेरि ? अहेलेको आम सचेत समुदायको चासो र जिज्ञसाको विषय हो यो । हिन्दु धर्मिक संस्कारबाट हुर्केका प्रायः संचारकर्मी र संचारछापा मालिकहरु जसले संचारमाध्यमा एकछत्र प्रभुत्व जमाएका छन् । तिनीहरुले पनि संचार छापा माध्यमबाट एकोरो दशै पर्वको वारेमा आश्यकभन्दा बढी प्रचारप्रसार र प्रकाशनबाट के भ्रम देखाईन्छ भने, नेपालको राष्ट्रिय चाड नै एक मात्र दशै हो भन्ने । अनि त्यस्तै प्रतित हुनेगरी विभिन्न मिडिया र पत्रकारहरुले पनि महत्व दिएका देखिन्छन् । जति महत्व अरु महत्वपूर्ण नेपालका अन्य समुदाय, धर्मलम्बीहरुको चाड पर्वलाई दिएका हुन्नन् । नेपाल राज्यमा शाषन गर्ने, नीति नियम बनाउनेहरु प्रायः हिन्दु धर्मबाट प्रभावित नै अधिकांस शाषकवर्गहरु रहेकै, भएकै कारणले पनि आजको दिनसम्म त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैले पनि उनीहरुको व्यवहार, क्रियाकलापबाट त्यस्तै कुराको छनक देखिन्छ, भटिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको बृहत रुपमा एकिकरण गर्नुभन्दा पहिला नेपालका साना साना राज्यहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता, सास्कृतिक स्वतन्त्रता, भाषिक स्वतन्त्रता रहेको भेटिन्छ । इतिहास केलाउदा । तर राष्ट्रिय स्वाभिमान सर्वभौमसत्ता अखण्डतायुक्त राज्यको गुण भने अवश्य नै कम भएको प्रतित हुन्छ । जब पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाल राज्यको एकिकरण गरियो । त्यसबेला भौगोलिक रुपमा एकिकरण त भयो । तथापि त्यसै वेला देखि सबै संस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक समुदायहरुको भावनात्मक एकिकरण भने भएन । र समान रुपले सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन, प्रबद्र्घन र जगेर्ना पनि हुन सकेन । आजको दिनसम्म पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसो भनिरहदा फेरि यो पक्तिकार एकिकरण पूर्वका बाइसे, चौविसे भुरे टुक्रे राज्यहरु जस्तै फेरि नेपालमा साना साना राज्यहरु बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चर्चा गरिरहेको होइन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सर्वभौमसत्ता अखण्डता जोगाउनु पर्छ, भन्ने सवालमा सबै देशबासीहरु एक मत हुनपर्छ । चाहे जुनसुकै वर्ग, जाति, धर्मको समुदाय होउन । त्यस्तो वाताबरणको सिर्जना कसरी बन्नसक्छ । त, भन्दा सामाजिक न्याय अनुसारको कुरा, त्यही कुरा अनुसारको कानून र त्यही कानून अनुसारको राज्यका बिशेषगरी शाषक वर्गहरुले र आम देशवासीहरु (नागरिकहरु)ले व्यवहार देखाएमा अवश्य पनि हुनसक्दछ । तर विडम्बना वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ‘काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै भईरहेको छ राज्यको हरेक क्रियाकलाप ।
नेपाल बहुसांकृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय मुलुको रुपमा परिचित र संविधानमा नै उल्लेख भैसकेको छ । त्यसमा कसैको दुईमत छैन । तर पनि किन यो राज्यको चरित्र एक सांस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, एक जाती मात्रै भएको मुलुकको जस्तो हुनपुग्यो ? प्रश्न गम्भिर छ ।
संस्कृति र धर्म विचको अबधारण एवं अन्तरसम्बन्ध :
दशैं पर्व अथवा चाड संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । संस्कृति भनेको मानवले जे जति कुरा मानव समाजमा विकास गरेका हुन्छन् । ती भौतिक स्वरुपका होउन या अभौतिक स्वरुपका होउन सबै क्रियाकलपहरुलाई संस्कृति भनिन्छ । मानवशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ का अनुसार “संस्कृतिलाई मानवले समाजका सदस्यको हैसियतले जे जति कुरा क्रियाकलाप, व्यवहार सिक्दछन वा विकास गर्दछन्, त्यसैलाई संस्कृति भनिन्छ” भनी संस्कृतिको परिभाषा दिएका छन् ।
संस्कृति समाजका हरेक सामाजिक क्रियकलापसँग सम्बन्धित भएकाले संस्कृतिका अभौतिक वा अध्यात्मिक क्रियाकलाप धर्मसँग जोडिन्छन् । धर्म भनेको समाजको एउटा सामाजिक संस्था हो । मानशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ “आध्यात्मिक अलौकिक शक्तिमाथि, पवित्र, अपवित्रताको भावना सहित सामाजिक क्रियाकलापको व्यवहारमा विश्वास गर्नु नै धर्म हो” भनी भन्दछन् । त्यसैगरि अर्का विद्घान ‘जे.मिल्टन यिङयर’ ले “धर्म आस्था र व्यवहारको एक पद्घति हो, जसद्घारा मानिसको एक समुह मानव जीवनका अत्यावश्यक समस्या सित जुध्छ” भनी धर्मको परिभाष दिन्छन् । समग्रमा धर्म एउटा समाजिक संस्कार हो । धर्मको सामाजिक संस्कार अनुरुप पनि समाजमा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया विकास भएको हुन्छ ।
त्यसो त धर्मको सम्बन्धमा फरक फरक अबधारणहरु पनि छन् । संरचनागत प्रकार्यात्मक धारणअनुसार धर्मलाई मानिसको सर्वकालिन र प्राकृतिक गुणका रुप र समाजिकीकरण प्रक्रियामा एकिकरण, नियन्त्रण एवं एकताका रुप पनि मान्दछन् । प्रकार्यावादी समाजशास्त्री ‘इमाइल दुर्खिम’ का अनुसार “धर्म पवित्र बस्तुहरुसित सापेक्षीत विश्वास र व्यवहारहरुको एकिकृत व्यवस्था हो” भन्दछन् । भने, अर्का प्रकार्यावादी विद्घान ‘मेलिनोस्की’ “धर्म विश्वास एवं कार्यप्रणालीको स्वरुप र व्यक्तिगत अनुभवका साथै समाजशास्त्रीय घटनाक्रम हो” भन्दछन् । फेरि द्घन्द्घात्मक अबधारणा राख्ने कार्लमाक्र्सले “धर्म भनेको अफिम हो, यसले कतिपयलाई लठ्याउछ भने कतिपयलाई मार्ने काम पनि गर्दछन्” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् । यस धारणालाई माक्र्सवादी धारण पनि भनिन्छ । यस धारणा अनुसार धर्म शोषण गर्ने भरपर्दो माध्यम हो । धर्मले समाजमा एकता नभै द्घन्द्घ, संघर्ष र विवाद पैदा गराउछ भन्छन् । यसै सन्दर्भमा अर्का माक्र्सवादी अवधारणका विद्घान ‘फ्रेडरिक एन्जेल्स’ ले “धर्म भनेको मानव कल्पनाको उपच हो, त्यस्तो परिकल्पनाले गर्दा समाजमा खास वर्ग (शाषक वर्ग) को नेतृत्व हुने गर्दछ, जसले शाषक वर्गको मात्रै हित गर्दछ अरु वर्गको वास्ता नै गर्दैन” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् ।
त्यसैले समाजमा आज पनि देखिने धार्मिक नियम जस्तो जातीय छुवाछुत र उँचनिचको भावना, समाजमा महिलाका विरुद्घ विकास गरिएका कुसंस्कारहरु, समाजमा विकास गरिएका पेशागत बन्देजहरु, खानपान र लवाईखवाइ मात्र नभई शिक्षा लेनदेनमा समेत रहेका बन्देज धार्मिक विश्वासबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् । समाजमा सत्तासिन वर्ग तथा समुदायले नै धर्मका बारेमा कुप्रचार गरेका हुन्छन् । जसबाट सत्ता टिकी रहोस् । अझ सामन्तवादी समाजमा त झन् धर्म नै राज्यको पथ प्रर्दशक बनेको हुन्छ । सामाजिक परिवर्तन विनाको सामाजिक विकास र परिष्कार हुन सक्दैन । तर धर्मले संधै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको हुन्छ त्यसलाई भनेर माक्र्सवादीहरुले भन्ने गरिन्छ ।
समाजमा कुनै धनी र कुनै गरीब हुनु । कुनै जातले उपल्लो र तल्लो जात हुन । कुनै बुद्घिमान र कुनै अनपढ हुनु । कुनै नेता र रैति हुनु । कुनै शासक र शोषित हुनु । भन्ने कुरा धार्मिक नेताहरु तथा सम्प्रदायहरुले पूर्वजन्मको फल हो । ईश्वरको चाहना तथा तक्दीरमा लेखिएको कुरा हो । भनी, भ्रामक कुप्रचार गरेर समाजको सत्तासिन तथा धार्मिक प्रबुद्घ वर्गले सधै आफ्नो इच्छा पुरा गर्न खोजेको हुन्छ । समाजका अन्य वर्ग तथा समुदाय कहिल्यै पनि माथि नउठुन. भन्ने धारण धार्मिक नेताहरु र शासकहरुको रहेको हुन्छ । भन्ने जस्ता तर्क पनि माक्र्सवादीहरुको नै रहेको पाईन्छ ।
के दशै पर्व हिन्दु धर्मको मात्र महान चाड हो त ?
अब चर्चा गरौ किन दशै पर्वलाई हिन्दु धर्मको महान चाड भनिन्छ त ? दशै पर्व/चाड हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । हिन्दु धर्म सम्बन्धित मिथक अनुसार पौराणिक कथन अनुसार संसारमा भएका मानव जाति, देवताहरु तथा ऋषि–मुनिहरुलाई दुःख दिएर विनाश गर्दै आएको अहंकारी रावणलाई भगवान श्रीरामले बध गरी विजय हासिल गरेको । संसारलाई मुक्ति प्रदान गरेको दिन तथा जगत् जननी नवदुर्गा माताले महिषासुरलाई बध गरी दुःख र अहंकारमाथि विजय प्राप्त भएको दिन विजयदशमी हो । हिन्दु मिथक अनुसार । पन्ध्र (१५) दिनसम्म मनाइने दशैंका सुरुका नौ (९) दिन (जसलाई नवरात्रि पनि भन्ने चलन छ) सम्म नवदुर्गा र भगवान् श्रीरामले राक्षसहरुमाथि विजय हासिल गरेको दिन र अन्तिमका पाँच (५) दिन विजय उत्सवका दिन मानी माता दुर्गा तथा भगवान् रामको पूजा–आरधाना तथा त्यसै राक्षसहरुको बध गरि तिनीहरुको रगतको प्रतिक संकेतिक रुपमा मान्यजनबाट रातो टीका र जमरा लगाई आशिवार्द ग्रहण गरिन्छ । भगवान् श्रीराम, भगवती नवदुर्गाको आराधनासँगै बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस आदि पशुपंक्षीको बलि दिएर भव्य भोज गरि मानिन्छ । यसरी यो चाड÷पर्व हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित भएकोले नै यसलाई हिन्दुहरुको महान चाड भनिएको हो ।
त्यसो त दशै नेपालीहरुको महान राष्ट्रिय चाड/पर्वकै रुप ग्रहण गर्नेगरि विकास नभएको होइन । यसले धार्मिक महत्वको साथै सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्वको अर्थ राख्ने असत्यमाथि सत्यको विजय तथा समाजका सम्पूर्ण सदस्यलाई वर्षका बाँकी दिन आफ्ना नकारात्मक व्यवहारबाट टाढा रहन सचेत बनाउँछ । वर्ष दिनसम्म टाढा रहेका परिवारका सदस्य एवं आफन्तजनबाट टीका, जमरा र आशिर्वादका लागि भेला हुने शुभ अवसर प्रधान गर्दछ । तर दशैको सांस्कृतिक पक्षलाई शाषकवर्गले भनौ या धर्माभिरुपीहरुले एक निश्चित धर्म, जातीयता वा समुदायको एकपक्षिय आधारमा रंगाउने काम भयो, र हुदैपनि छ ।
प्राणीहरु मध्ये मानव चाहि संस्कृतिले गर्दा नै उत्कृष्ट र सामाजिक प्राणीको रुपमा दर्ज भएको हो । संस्कृति भन्ने वित्तिकै समुदाय वा मानवीय पहिचानसँग जोडिन्छ । पहिचान अरुभन्दा भिन्न देख्न र देखाउनको लागि मानवले नै निर्माण गरेको हो । हामी को हो ? के गर्ने भन्ने प्रश्नको जन्म जब मानबजातीको मस्तिष्कमा राज भयोे । सृष्टिको त्यही दिनदेखि पहिचानको महशुस भयो । त्यसपछि विवाह, परिवार, नाता, समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म नियम कानुनको आवश्यकताको महशुस भयो । अनि नियम र कानुनको उत्पति हुनु भन्दा पहिला धर्मको विकास भयो । त्यही क्रममा मानवसमाजको संचालन र नियन्त्रण गर्न धार्मिक रुपमा पाप भन्ने शब्दको जन्म भयो । अनि, त्यही शब्दबाट नै हाम्रो समाजको नियन्त्रण हुदैगयो । पछि त्यसले पनि नसकिएपछि नियम कानुनको विकास गरियो । निष्कर्षमा समाजलाई संचालन गर्ने सवालमा समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म, नियम कानुनको जन्म भयो । भने, आफ्नो समुदायलाई परिचित गर्ने सवालमा संस्कृतिको विकास भयो । यी दुबैको समायोजनाबाट नै पछि समाज संचालनको अन्तिम अस्त्र राज्यको उत्पत्ति भयो । शाषन गरयो, कुनैपनि समुदायको व्यक्तिहरुले । त्यही शाषन गर्ने वर्गको अनुकुलतामा नै राज्यको संस्कृति, धर्म, भाषा, नीति, नियम अनुसारकै कानुन बन्दै गयो । एवं रितले विभिन्न भूभागको भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाका समुदायको व्यक्ति वा मानिसहरुले शाषन गर्ने क्रममा आफ्नो तौर तरिका र आफु जुन संस्कृतिबाट हुर्केको त्यही संस्कृति, भाषा र धर्म अनुकुलताको संस्कृतिलाई टेवा वा मलजल गर्दै आईरहयो, गरिदै पनि छ ।
नेपालमा पनि हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको मानिस वा व्यक्तिहरुले शाषन गर्दै आइरह्यो, र छ । त्यसैले उनीहरुले दशैलाई राष्ट्रिय चाडकै रुपमा सम्मान दियो । त्यसलाई कानूनी रुपमानै अनिवार्य मान्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइयो ।
निश्चित रुपमा मानव आफु जुन समाज, संस्कृति, धर्मबाट हुर्कियो त्यही समाज, संस्कृति, धर्मको प्रभाव त मानिसलाई हुन्छ नै । त्यो जैविकिय मानवीय गुण नै हो । तर राज्यको संचालकको नै नाताले हेरयौ भने जैविकिय मानवीय गुणलाई राज्यकरण गुणमा अवतरण गर्नु कतिको जायज हो ? जुन राज्यमा जति प्रकारका समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म छ त्यी सबैलाई सापेक्षातामा सोचेर कर्मलाई अघि बढाउनु पर्ने हो । तर हाम्रो देश नेपालमा त्यसो नभएको अवस्था छ ।
राज्य बास्तबमै धर्मको सवालमा धर्मनिरपेक्षता हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनकी राज्यमा बसोबस गर्ने मानवको निश्चित समुदायले निश्चित धर्म मान्ने हो । धर्म मानवले नै आविष्कार र विकास गरिएको हो । पछि आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या र विश्लेषण गरियो धर्मलाई । त्यो छुट्टै बहषको विषय हो । त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुदैन । तर हाम्रो देश नेपालमा राज्यको धर्म भयो । कुनै खास धर्मलाई इतिहास देखिनै विशेष प्राथमिकता दिदै आयो । किनकी उनै धर्मलम्बीहरुको बाहुल्यता राज्य संचालनको तहमा भएको हुनाले होला सायद ।
इतिहास साक्षी छ श्री ३ पद्मशमशेरको पालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी लिखित कानुन “नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४” भन्यो । त्यसपछि २००७ सालको अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसमा नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ लेखेन । वास्तवमा नेपाललाई हिन्दु राज्य भन्ने विशेषण राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासनलाई भारतका अतिवादी हिन्दुहरुको सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त गर्न र बैधानिक आवरण दिने प्रयत्न स्वरुप नेपालको संविधान (२०१९) मा पहिलो पटक लेखिएको भेटिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पछि जनताको प्रतिनिधिहरुबाट पहिलो पटक बनाएको संविधान ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा संविधान आयोगका सदस्यहरुले राजतन्त्रलाई मात्र हिन्दु राजतन्त्र मान्नुपर्छ । राज्यलाई हिन्दु राज्य भनिनु र लिख्नु हुदैन । त्यसो भन्दाभन्दै पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य भनि उल्लेख गरिएको थियो । भनी त्यतिवेलाको तत्कालिन २०४७ सालको संविधानका मास्यौदाकारहरुले भनिआएका सुन्न पाईन्छ । तर २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल कुनै धर्मको पेवा राज्य होइन । धर्मनिरपेक्षा भनी घोषण भई धर्मनिरपेक्षा राज्य भईसकेको छ । धर्मनिरपेक्षा राज्य भनेको राज्यले कुनैपनि धर्मलाई प्राथमिकता नदिई वा नगरी विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु हो ।
तर हाम्रो देशमा राज्यलाई त धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझैपनि निरपेक्षता देखिएको छैन । अझैपनि कुनै एक धर्म विशेषको चाड वा सांस्कृतिक संस्कारलाई बढी संरक्षण, सम्बर्धन, र प्रबद्र्घन गरिएको देखिन्छ । वास्तविक कुरो के हो भने राज्य नै धर्म निरपेक्ष भईसके पछि कुनै पनि धर्म विशेषको सांस्कृतिक संस्कार वा चाडवर्पलाई न राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ न त सम्बद्र्घन । न प्रबर्धन नै । त्यो दायित्व भनेको तत् तत् धार्मिक समुदायको नै हो । राज्यले विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु पर्ने हो ।
यदि सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई राज्यको गहनाको रुपमा मानी त्यसलाई संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबद्र्घन गर्नु नै परेको खण्डमा पनि राज्यले राज्यमा भएका सबै प्रकारका धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई बराबरी हिसाबमा पक्षपात नगरिकन सापेक्षतामा व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर गरिएको छैन किन ? त्यसतर्फ राज्य र राज्यको संचालन गर्ने शाषकवर्गहरुको, नीति नियम बनाउने वर्गको ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ ।
नेपालमा हिन्दुहरुको संख्यालाई लिएर हिन्दु राज्य लेख्नुपर्छ, भन्ने मत पनि छन् । राज्यलाई हिन्दु राज्य राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । भनि धर्मलाई राजनीतिक मुद्द बनाउने विचार पनि नआएका र नभएका होइनन् । तर धार्मिक विश्वास भनेको चाहे १ जना व्यक्तिले राखोस चाहे १ लाखले राखोस उत्तिकै समान महत्व पाउछन्, र पउनुपर्छ । यसमा कसैले संख्याको आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाइदैन । धार्मिक विश्वास भनेको कुनै राजनीतिक वा अन्य विषयगत प्रस्ताव जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने विषय होइन । यो विश्वासको कुरो हो र एक्लै पनि पूर्ण हुने विषय हो । हिन्दुहरुको संख्या असी प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर जनमतसंग्रहमा लानुपर्ने वा हिन्दु राज्य बनाउने भन्ने विषय लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । धार्मिक विश्वास वा स्वतन्त्रताको विषय मौलिक अधिकारभित्रको विषय हो । जतिसुकै संख्यामा भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल नहुँदासम्म वा अरुलाई अप्ठ्यारो नपार्दासम्म आ–आफ्ना विश्वासमा रहन पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । त्यसकारण धर्मका विषयलाई लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल धारणा बनाउन मिल्दैन । र यसलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय मान्नुपर्छ । राज्य कुनै पनि तोकिएको धर्ममा बाँधिन मिल्दैन । धार्मिक अभियान र अनुष्ठाहरु व्यक्तिगत अभिरुचिका विषय मात्र हुन् ।
वर्तमान अवस्थामा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाड दशैमा मात्र राज्यका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घटस्थापनामा १ दिन सहित फुलपाती वा सप्तमी देखि द्वादशी सम्म जम्मा ६ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा १५ र न्याय सेवाको संस्थाहरुमा १५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । एक महिना बराबरको दशै खर्च भनि पेश्की स्वरुप भत्ता भनी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो र छ दशै मनाओस भनेर । यद्यपि यसलाई निजामति कर्मचारीको ऐनमा संसोधन गरी वर्षभरिमा एक पटक जुनसुकै बेला जुनसुकै चाड÷पर्वमा लिनसकिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । तर त्यस अनुसार व्यवहार कार्यान्वयनमा प्रचलित भएको देखिदैन । त्यतिमात्र होइन वर्षभरिमा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक पर्व वा चाडमा राज्यले सार्वजनिक विदा अरु दिन पनि दिन्छन् । दशै जस्तै अर्को हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको दोस्रो महान चाड भनी ‘तिहार/शुभ दीपावली’ मा पनि लक्ष्मी पूजाको दिन देखि गोवद्र्घन पूजाको दिन सम्म जम्मा ३ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा ५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । त्यसैगरि हिन्दु धर्म सम्बन्धिततै अरु सांस्कृतिक संस्कार जनै पूर्णिमामा १ दिन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा १ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन, महाशिवरात्री १ दिन, फागु पूर्णिमा (तराईमा सहित) २ दिन, राम नवमीमा १ दिन, इन्द्र जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), घोडे जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), गाई जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), भोटो जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), छठ पर्व १ दिन, नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत् १ दिन, हरित तालिका तीज/ऋषि पञ्चमीमा २ दिन (महिलाहरुलाई मात्र) गरी वर्षभरिमा लगभग जम्माजम्मी २४ दिन राज्यले सार्वजनिक विदा दिन्छन् ।
यहाँनिर फेरि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि राज्य धर्म निरपेक्ष हुदाहुँदै, यदि राज्यले हिन्दु धर्म विशेषको चाडपर्वमा मात्र यसरी विदाको व्यवस्था एवं विशेष सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन्छन । भने, राज्यका अरु अरु धर्म विशेषको चाडमा पनि त्यस्तै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि पर्दैन ? फेरि यसै गरी राज्यका सबै धर्म विशेषको चाड पर्व र सांस्कृतिक सस्कारमा सार्वजनिक विदा र विशेष सुविधा एवं सहुलियतको व्यवस्था हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको सांस्कृतिक संस्कारको सांस्कृतिक पर्वको हारहारीमा नै दिने हो, भने एक वर्षमा काम गर्ने समय राष्ट्रमा कति बच्ला ? अनि आर्थिक हिसाबले राज्यको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ?
त्यसैले चाहे जुन सुकै धर्म या समुदायको व्यक्तिहरु पुगोस राज्यमा शाषन गर्न । वा नीति नियम बनाउन । त्यी वर्गले यस्ता किसिमको ‘केन्द्रिकृत एकात्मक स्वार्थी अंहकारवादी एकपक्षीय चरित्र र सोच’ लाई त्याग्नु पर्छ । त्यो आजको वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राज्यको आवश्यकता पनि हो । होइन भने यो २१ औ शदाब्दीको बैज्ञानिक आधुनिक युगका सचेत जनताले पक्कै पनि त्यस्ता किसिमका सोच र चरित्रको समर्थन त गर्दैन होला ।
त्यसैले राज्यभित्र भएका सबै धर्म मान्ने समुहायहरुलाई राज्यले व्यवहार गर्दा समन्वयात्मक, सन्तुलित तरिकाले र निस्वार्थी भावनाले एउटै व्यहार गरिएमा हिन्दु धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्वमान्ने समुदाय र राष्ट्रका सबै धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्व मान्ने समुदायको लागि पनि राम्रै कुरा हुनेथियो । यो नेपाली राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रुपमा धनि, सामाजिक रुपमा एकता राष्ट्रिय रुममा बलियो र विकसित बनाउने दृष्टिले पनि अत्यन्त उचित र आवश्यक देखिन्छ । सबैको ध्यान जाओस् । अस्तु ।